Miverina ny fahatapahan-jiro ao Toamasina: “Tapaka ny tariby mitondra ny herinaratra” | NewsMada
Miverina ny fahatapahan-jiro ao Toamasina: “Tapaka ny tariby mitondra ny herinaratra”
Somary niverimberina mateti-pihavy indray ny fahatapahan-jiro lavareny teto andrenivohitr’ i Betsimisaaka tato ho ato ary saika maharitra ora roa be izao vao miverina, avy eo misy fahatapahana indray any amin’ny faritra hafa. Toy izany hatrany hatrany. Tsy niandry ela fa nitondra fialan-tsiny ho an’ny mpanjifa ny tale iraisam-paritry ny Jirama, i Toto Jean Claude, ny 14 novambra teo, tao amin’ny Jirama Bazary be Ampasimazava
Nambarany fa “noho ny fahatapahan’ny tariby mitondra ny herinaratra avy any Ivolobe mankaty amin’ny foibe Bazary be no antony nahatonga ny fahatapahan-jiro tato anatin’ny andro vitsivitsy koa ialan-tsiny aminareo mpanjifa”. Nampahatsiahiviny fa tratra ny fanambiny raha vao hiditra hitantana ny Jirama anatin’ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo ny tenany, momba ny fangatahana hampiditra herinaratra, efa niavosa nandritra ny taona maro.
Mamarana ny fangatahana niditra tamin’ny volana oktobra hatramin’ny desambra 2017 ny orinasa ary hiditra amin’ ireo fangatahana voaray ny volana janoary sy febroary 2018 tsy ho ela. “Efa mahatratra hatramin’ny 3.000 tokantrano izao ny fangatahana hampiditra herinaratra ny taona 2018, koa ezahina ho tratra hatramin’ny fiandohan’ny taona 2019 izany rehetra izany ”, hoy hatrany i Toto Jean Claude.
Misy ny mpisoloky ho mpiasan’ny Jirama
Hentitra kosa ny Jirama manoloana ireo mpisoloky misandoka mpiasan’ny Jirama. Manao fitafy tahaka ny fampiasan’ny Jirama izy ireo, manao fiaro loha sy mitondra “badge”. Lasan’ ireo mpisoloky ny volabe, ny herinaratra sy rano tsy tafiditra. “Mampitandrina izahay fa tsy handefitra ary milaza amin’ny mpanjifa mba hanatona birao hatrany sy hisava ordre de mission, misy ny sonian’ny tale mba tsy ho voasolokin’ny jiolahy tahaka izany“.